नयाँ मोड पायो गोरखाको चुनावी अभियानले ! – Everest Dainik – News from Nepal
नयाँ मोड पायो गोरखाको चुनावी अभियानले !
काठमाडौं, मंसिर ३ । डा. बाबुराम भट्टराईलाई यो चुनावमा आफ्नै पुरानो दल माओवादी केन्द्रसँग मात्रै लडेर नपुग्ने भयो । चुनावको एक साताअघि उनीसँग वैचारिक युद्ध गर्न योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष पीताम्बर शर्मा, चीनका लागि पूर्वराजदूत महेश मास्केलगायत ११ वाम बुद्धिजीवी खडा भएका छन् ।
शनिबार वक्तव्य जारी गर्दै उनीहरूले गोरखाका ‘पारखी जनतालाई अवसरवादी चिन्न अपिल’ गरे । नयाँ शक्ति पार्टी संयोजक भट्टराई गोरखा-२ मा माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै छन् ।
अन्नपूर्णमा खबर छ-दुई वर्षसम्म एउटै पार्टीका दुई उपाध्यक्षमध्ये हाल श्रेष्ठका पक्षमा र भट्टराईका विपक्षमा वाम बुद्धिजीवीको वक्तव्यले गठबन्धनमय चुनावी अभियानलाई नयाँ मोड दिएको छ ।
असोज १७ गते एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँगै राष्ट्रिय सभागृहमा वाम एकतासम्म पुग्ने गरी चुनावी गठबन्धन गर्ने संकल्प गरेका भट्टराई केही दिन नबित्दै कांग्रेससँग तालमेल गर्न पुगे । यसअघि वैशाख र जेठको स्थानीय चुनावमा कांग्रेससँग तालमेल गर्ने पालोमा माओवादी पार्टी थियो, जसलाई वाम बुद्धिजीवीहरूले अहिलेको जस्तो ‘सैद्धान्तिक महत्व’ दिएनन् । त्यो वक्तव्य पढ्दा अचम्म लागेन, उहाँहरूले हार स्वीकार गरिसक्नुभयो भन्ने बुझिन्छ । साथीहरूले बुझेर हस्ताक्षर गरेको भए हुन्थ्यो ।’
भट्टराईले भने चुनावी तालमेल आवश्यकताअनुसार हुने भन्दै वामबुद्धिजीवीले अशोभनीय र प्रत्युत्पादक काम गरेको टिप्पणी गरे । उनले कांग्रेससँग माओवादीले १२ बुँदे सहमतियता सहयात्रा गरेको नबिर्सन आग्रह गरे । ‘त्यो वक्तव्य पढ्दा खासै अचम्म लागेन, उहाँहरूले पहिले नै हार स्वीकार गरिसक्नुभयो भन्ने बुझिन्छ,’ भट्टराईले भने, ‘साथीहरूले बुझेर हस्ताक्षर गरेको भए हुन्थ्यो । चुनावमा तालमेल हुन्छ, भोट हाल्ने म्यान्डेट जनताको हो ।’ रोकाले भट्टराईबाट वामपन्थको अपव्याख्या भएको आरोप लगाए । भट्टराईले भने त्यसको प्रतिवाद गर्दै ‘कोही पनि साम्यवाद ल्याउन राजनीति नगरिरहेको’ टिप्पणी गरे ।